Nzira Nhatu Mabhizimusi Anorwa Nenhare | Martech Zone
Nzira Nhatu Mabhizinesi Anonetseka neMobile
China, May 31, 2012 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Kugamuchirwa kwemafoni kuri kuwedzera kumusoro asi mashoma mabhizinesi ari kupindura. Avo vari kuona mibairo inoshamisa mukudyara kwavo… avo vasiri kusara kumashure. Meseji mune ino infographic haigone kuve yakajeka.
Ndiwo mazano, akapusa. Kunyangwe smart maCIO uye mabhizinesi akachengetedzwa-zvakanaka vane matambudziko sezvavanogamuchira kufamba. Uye nepo nharembozha uye maapplication ari matsva uye akaomarara munzira dzakatosiyana kubva kumaPC uye kuseva kunyorera, zvinonetsa zvinovhiringidza vatungamiriri veIT zvinowanzove zvishoma tekinoroji uye zvakanyanya bhizinesi uye zvine hungwaru. Izvo zvinoenderana neIDG Tsvagurudzo
Dhawunorodha iyo yakadzika Whitepaper paSAP.
Revera Dhata Pakarepo neRapLeaf
May 31, 2012 pa 1: 34 PM
Sezvo tekinoroji yenhare ichiramba ichivandudza izvi zvinogona kungove nyaya hombe kune ese marudzi emabhizinesi. Nyanzvi munyaya iyi dzichaita zvakanaka zvikuru mune zvemari mumakore mashoma anotevera. Ndatenda neruzivo runobatsira.